Mandala Tattoo Ideas for Men and Women - Tattoos Art Ideas
Mandala Tapa-kevitra ho an'ny lehilahy sy vehivavy
sonitattoo Aogositra 29, 2016
Tsy misy milaza fa ny tontolon'i Mandala dia iray amin'ireo tsara indrindra eto an-tany. Mahita izany indray mandeha ianao ary mitadidy ny fahatsiarovanao ny tatoazy. Misy tantara marobe izay manelingelina manodidina an'io tatoazy manokana io. Ankehitriny, tsy ireo vahoaka Mandala intsony no mampiasa io tatoazy io. Azonao ampiasaina koa izany.
Ny mandala mandala dia manana dikany maro ary afaka midika hoe manontolo. Ny boribory eo amin'ny tatoazy dia miresaka momba ny fahalavorariana sy ny fifandanjana ary koa ny mandrakizay, rehefa mijery ny halaviran-dalana avy eny afovoan-tanàna mankany amin'ireo hevitra rehetra. Maro ny fivavahana mampiasa izany mba hiteny zavatra maro ho an'ny mpino.
Hindoisma - Araka ny hevitry ny Hindoisma, ny #mandala dia midika fa ny fisaintsainana. Izany dia satria ampiasaina ho fifantohana ary lasa fitaovana ara-panahy.
Fivavahana Kristianina - Ny kristianisma dia mandalo ny laharana hafa satria mety ho hita ao amin'ny faritra samihafa ao amin'ny fiangonana izany, toy ny varavarankely izay midika hoe asa manan-danja ary azo ampiasaina amin'ny endriny.
Bodisma - Manana zavatra atao amin'ny Bodista ihany koa i Mandala, ampiasain'izy ireo amin'ny fombafomba ara-pinoana sy misaina. Ampiasaina ho mariky ny fandanjalanjana eo amin'ny fiainana izany.
Ny Mandala #tattoo dia nanjary lasa maro ny olona mampiasa azy mba hanehoana zavatra be dia be amin'ny fiainana, toy ny vatan'ny selestialy. Ny tatoazy dia azo ampiasaina amin'ny famoahana fanambarana maro izay azonao fantarina raha toa ianao ka tia tato ho an'ny tatoazy ary maniry hevitra.
Inona no atao hoe tatoazy toy izany? Nandritra ny taona maro, nahita olona an-jatony izahay mampiasa ity tatoazy ity hanoratana ny vatany. Eveyone manana ny fomba fijeriny manokana momba ny fahitana tatoazy. Olona vitsivitsy tahaka izany raha tsy misy ny sasany, ary azo ekena tanteraka amin'ny antony fa tsy dite izy io. amin'ny alalan'ny
Roa taona maromaro talohan'io, io karazana asa aseho amin'ny vatana io dia nekena ho an'ny besinimaro, ary ireo olona tena nanao izany dia heverina ho fikomiana. amin'ny alalan'ny
Na izany aza, ny tontolon'ny sarambambem-bahoaka amin'izao fotoana izao dia nanjary lasa liberaly tokoa manoloana izany, na izany aza dia maro ireo olona tsy mankasitraka ny famerenana azy ireo amin'ny fotoana rehetra. amin'ny alalan'ny
4. Sweet Tango Mandala
Ny tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona dia ny fomba "tatoazy" no fampidirana ny teny tahisianina "tatu" izay maniry ny hanisy zavatra. Misaintsaina ny toerana nanombohan'ny zavatra rehetra? amin'ny alalan'ny
5. Tendrombohitra Mandala Tattoo
Ny zavatra rehetra nodinihanao, azonao ve ny rivotry ny "Iceman" malaza nahita ny 1991? Izy no olona voalohany izay nanana ny vatany nanoratra tao amin'ny toerana tsara kokoa 58. Ny famotopotorana vitsivitsy anisan'izany ny fiarahan'ny sela dia nampiseho fa izy no 5300 taona amin'ny alalan'ny
6. Back Tango Mandala
Eo andaniny ireo, dia hita fa tsy ny famolavolan'ny vatana akory no zavaboary manan-danja amin'ny fomba rehetra; Efa nisy taona maro talohan'izay. amin'ny alalan'ny
7. Tango Mandala Tattoo
Ireo fiaraha-monina efa ela no miverina amin'ny taona maromaro izay dia nampiasaina tamin'ny fanaovana asa tanana mba hisorohana ny aretina. Ny fampiasana ny fanjaitra hanodina ny vatana dia nohazavain'ireo Ejipsiana avy eo ary niparitaka nanerana an'i Gresy, Arabia ary tany amin'ny faran'ny Azia. amin'ny alalan'ny
8. Mandala Mandala Tattoo
Na dia teo aza ny nampiasana azy hanavaka ny hatsembohana tamin'ny voalohany, dia niova ho fahaizana asa any Japon izany, na dia ny mafia Yakuza aza nampiasa azy mba hampitahotra ny hafa. amin'ny alalan'ny
Mandeha indray mialoha ny taonany maro; Fitsipika ho an'ireo fianakaviana saro-pady izay manana ny tampony eo amin'ny vatany, na dia taorian'ny fampidiran-dry Norman aza, dia nanjavona sy ngezabe io lamina io. amin'ny alalan'ny
Nandritra ny am-polo taonany, ny fitaovana sy ny fitaovana nampiasaina mba hamokarana dia niova araka ny tokony ho izy avy amin'ny ampahany maranitra amin'ny olana iray izay mijanona ho vita ny milina ampiasaina ho ampahany amin'ny 1891. amin'ny alalan'ny
11. Tendroka Mandala Mandala
12. Nahoana ianao no tokony handeha ho an'ny Tattoo Mandala
13. Toa mahatalanjona Mandala
14. Tendrombohitra Mandala Tattoo
Maro ny zavatra azonao atao mba hahitana ny Mandala anao. Raha misaritaka amin'ny karazana tatoazy ianao #design izay hosodoko ao amin'ny Mandala anao, mandehana fotsiny amin'ny aterineto ary jereo ireo design ambiny izay mety hifanaraka aminao tsara. loharanon-tsary
15. Back Tango Mandala
Raha te-hijery tsara tahaka izao ianao, ny zavatra rehetra ilainao dia ny manitsy ny tatoatanao manokana amin'ny teti-panoratana na ny soratra amin'ny teny hoe ho tokana. Ny tsiambaratelon'ny fijerena tsaratsara kokoa sy manokana amin'ny tatoazy dia ny mamantatra izay tsy nataon'ny sasany tamin'ny tetikasany. loharanon-tsary
Ny tolotra Mandala dia manana hafatra manokana izay azony alefa. Io no iray amin'ireo tatoazy tsara indrindra izay azon'ny olona aleha. loharanon-tsary
Tsy vitan'ny hoe lehibe sy tsara tarehy izy io, fa manome anao ny rivotra sy ny hatsaran-tarehy. Azonao atao ny manandrana karazana fanandramana tianao hatao amin'ny fanolorana zavaboary samihafa, endrika na fanoritsoritana ao amin'ny Mandala misy malalaka malalaka. loharanon-tsary
18. Mandala Tattoo Full Back
Misy zavatra tokony hodinihinao alohan'ny ahafahanao mandao ny tontolonao Mandala. Tokony hieritreritra ny hafatra tadiavinao hampitaina amin'ny tatoazy ianao. loharanon-tsary
19. Mandela Tatoala Mandala
Tokony handinika ianao raha mahazo tatoazy mba hanomezam-boninahitra ny ampahany amin'ny vatanao. Angamba, mieritreritra ny hamoaka hafatra ara-panahy ianao na karazana hafatra hafa tianao holazaina aminay. loharanon-tsary
20. Tendrombohitra Mandala Tattoo
Rehefa mieritreritra ny hahazo an'io tontolon'ny Mandala tsara tarehy ianao, ny soroka dia mety ho toerana tsara ho azy. Azontsika atao foana ny milaza aminao fa maro ny vehivavy mampiasa an'io endrika io. loharanon-tsary
21. Tafio-drivotra mandala mandala
Tsy misy afaka mandresy ny fahatanterahan'izany izay nahazoanao tato amin'ny Mandala malaza tahaka izao. Na dia tian'ny mpampiasa tambajotra voalohany aza izany. loharanon-tsary
22. Mandala Tattoo
Na ny lehilahy aza tsy afaka ny hivoaka ny tontolon'i Mandala. Amin'ny endrika toy izany, nahazo tatoazy lehibe ianao izay te hirehareha. loharanon-tsary
23. Amazing Tango Mandala
24. Tango mandala vavy
Tsindrio eto raha hanandramana bebe kokoa Mandala Tattoo Ink Idea ho an'ny zazavavy
raozy tatoazytattooshenna tattooarrow tattootato ho an'ny vatofantsikalion tattooseagle tattoosTatoazy ara-jeometrikaAnkle Tattoostatoazy ho an'ny zazavavytattoos mahafatifatytattoos voronatatoazy lolotattoos armtattoos backmoon tattoostattoosscorpion tattoocompass tattootattoo ideastattoos rahavavytattoos ho an'ny lehilahykoi fish tattootattoo eyecat tattoostattoos sleevenamana tattoos tsara indrindramehndi designtatoazy fokotattoo cherry blossomNy zodiaka dia mampiseho tatoazyanjely tattoostattoo octopustratra tatoazyHeart Tattoostanana tatoazytattoo watercolorelefanta tatoazytattoo infinitydiamondra tattooloto voninkazofitiavana tatoazytattoos crossmasoandro tatoazyTattoo Feathermozika tatoazytatoazy voninkazotattoos footrip tattoostattoos mpivady